वित्तीय स्वायत्तता अनुपात | अर्थव्यवस्था वित्त
वित्तीय स्वायत्तता भनेको कम्पनी वा व्यक्तिको क्षमता हो उनीहरूको उद्देश्य पूरा गर्न कसैको पैसामा निर्भर हुँदैन। आर्थिक अनुपातले हामीलाई एक महान लेखा उपकरणको रूपमा सेवा गर्दछ आर्थिक राज्यहरूको विश्लेषण गर्न जुन सुरुमा "जटिल" हुन सक्दछ। त्यसोभए एकल नजरका साथ हामी देख्न सक्दछौं कि कस्तो सुविधाजनक वा अनुकूल छ के हिसाब गरिरहेको छ। यस केस र लेखका लागि हामी वित्तीय स्वायत्तता अनुपातको बारेमा सबै कुरा व्याख्या गर्न गइरहेका छौं।
लेख पढेपछि, तपाईंसँग वित्तीय स्वायत्तता अनुपात के हो भनेर एक पूर्ण धारणा हुनेछ, यो कसरी गणना गर्ने र यसको प्रभाव यो कम्पनीको लागि। यस अनुपातमा धन्यवाद, लिन सक्ने निर्णयहरू अधिक अनुपात अधिक कठोर हुन सक्छन्। यसको विपरीत, कम निर्णयहरू विचार गरिन्छ जुन आर्थिक स्वायत्तताको डिग्री कम छ भने गर्न सकिन्छ। यो पनि एक उपकरण को रूप मा काम गर्दछ जुन कम्पनीहरूले गणना गर्न को लागी कति राम्रो गर्न को लागी आफ्नो स्रोतहरु againstण विरुद्ध हो। यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि अन्तसम्म पढ्नुहोस्।
1 वित्तीय स्वायत्तता अनुपात के हो?
2 वित्तीय स्वायत्तता अनुपात गणना गर्न सूत्र
3 अनुपात कसरी व्याख्या गर्ने?
3.1 कसरी debtण मा वृद्धि अनुपात असर गर्छ?
वित्तीय स्वायत्तता अनुपात के हो?
वित्तीय स्वायत्तता अनुपात कम्पनीले यसको लेनदारहरूमा निर्भरता निर्धारण गर्ने प्रयास गर्दछ, कि हो, जसलाई तपाईं owणी छ, debtण। यस गणनामा कम्पनीको debtणको सम्बन्धमा रहेको इक्विटी निर्धारण गर्ने काम समावेश छ। नियमित मा, अनुपातले हामीलाई उनीहरूको orrowण लिन सक्ने क्षमताको साथ सम्बन्ध दिन्छ। यो अनुपात जति उच्च छ, भविष्यमा कम्पनीको क्षमताले नै बाँच्ने क्षमता छ, विशेष गरी यो ध्यानमा राख्दै कि कुनै बिन्दुमा अनिश्चितता परिदृश्य खडा हुन सक्छ। एक राम्रो उदाहरण वर्तमान वातावरण हो जुन हामी पार गर्दैछौं जहाँ महामारीले यी अनुपातहरूलाई परीक्षणमा राख्छ। राम्रो स्वायत्त अनुपात भएको कम्पनीहरूले कम प्रभावित हुने सम्भावना बढी हुन्छ उनीहरूको अनुपात भन्दा धेरै अनुकूल नहुने समस्याहरू आउन सक्ने समस्या भन्दा पहिले।
केही व्यक्तिहरू "इक्विटी" सर्तहरू "इक्विटी" भन्न प्रयोग गर्छन्, यसले खास फरक पार्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हामीले एक वा अर्को शब्द प्रयोग गर्‍यौं जुन हामी समान चीजलाई बुझाउन आएका छौं। यस अवस्थामा इक्विटी जान्नको लागि, कुल सम्पत्तिहरूबाट दायित्वहरू (debtण) को कुल घटाउन आवश्यक छ।
वित्तीय स्वायत्तता अनुपात गणना गर्न सूत्र
हामीले पहिले टिप्पणी गरिसकेका छौं, यो इक्विटी र betweenणबीचको सम्बन्ध हो। सूत्र गणना गरिएको छ कुल दायित्वबाट लाभांश इक्विटी ()ण) दुबै छोटो र लामो अवधि। परिणामस्वरूप संख्या वित्तीय स्वायत्तताको अनुपात हो। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, हामी दुई कम्पनीहरूसँग उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछौं जुन हामीले सोचेका छौं एकै क्षेत्रका छन्। उदाहरण को लागी, कम्पनीहरु जो मानिस को यातायात को लागी समर्पित छन्।
पहिलो केसमा हामी एउटा कम्पनी भेट्छौं जसको इक्विटी कुल रकम १,1.540.000०,००० युरो छ। यसको कुल 2.000.000ण २,००,००० युरो बराबर छ। यसको मतलब यो हो कि हामी तिनीहरूको fundsणद्वारा उनीहरूको आफ्नै कोषहरू विभाजित गर्दछौं, कि तिनीहरूको दायित्वहरू, हामी ०.0,77 पाउँछौं। यो वित्तीय स्वायत्तताको अनुपात हुनेछ।
दोस्रो केसको लागि, हामीसँग एउटा कम्पनी छ जुन सानो आकारको छ र equ 930.000०,००० युरो छ। त्यसो भए हाम्रो कुल debtण २ 240.000०,००० युरो छ। इक्विटीलाई यसको debtणबाट विभाजित गरेपछि, हामी यो प्राप्त गर्दछौं कि यसको वित्तीय स्वायत्तता अनुपात 3,87..XNUMX छ।
यस केस र उदाहरणका लागि मैले केहि "प्रसिद्ध" केस हाल्ने प्रयास गरें, दोस्रो उदाहरणको। एक तर्फ, हामी कसरी दोस्रो कम्पनीको अनुपात much.3 को धेरै बढी देख्नेछौं। यो आर्थिक रूपमा अझ स्थिर छ, यसमा कुनै श .्का छैन। यद्यपि यो पक्कै धेरै बढ्न सक्दछ, तर ती सबै सम्भावनाहरु मात्र अव्यक्त रूपमा अवस्थित हुन्छन्, यसले यसको फाइदा लिदैन।
अनुपात कसरी व्याख्या गर्ने?
सामान्यतया, एक कम्पनीको राम्रो वित्तीय स्वायत्तता हुन्छ भनिन्छ जब यसको आधा भन्दा बढी स्रोतहरू आफ्नै कोषबाट आउँछन्। तर एक विचार प्राप्त गर्न, कम्पनीले अपेक्षा गरेको यो अनुपातको न्यूनतम संख्या ०.0 वा उच्च हुनुपर्छ। ०.0 र १. between "सामान्यतया" बीचको अनुपात सब भन्दा सामान्य र सबै भन्दा राम्रो मान पनि हुन्छ।
एकातिर, कम्पनीसँग तरलता र स्रोतहरू छन् कठिन समयमा सामना गर्न। यी क्षणहरू धेरै गाह्रो नहुन सक्छ, तर तपाईंको गार्डलाई कम गर्नाले र अत्यधिक आत्मविश्वास पाउँदा प्रायः राम्रो नतीजाहरूमा जान सक्दैन। अर्कोतर्फ, हामी धेरै ठूलो bणको बारेमा कुरा गर्ने छैनौं, जसको अर्थ यो छ कि यो राम्रो वित्तीय स्वायत्तता छ र आवश्यकता वा लगानी को मामला मा यो आफ्नो अस्तित्व जोखिम मा डाल छैन। यस कारणले गर्दा, उच्च अनुपात कायम राख्ने वा राख्ने प्रयास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले शक्ति र स्थिरताको संकेत गर्दछ।
डाटाको रूपमा, यो थपिनु पर्छ कि सबै कम्पनीहरूमा कुनै सार्वभौमिक वित्तीय स्वायत्त अनुपात लागू हुँदैन। प्रत्येक क्षेत्र फरक छ, र यो केवल तपाईले काम गरिरहनु भएको क्षेत्रमा मात्र निर्भर गर्दछ, तर प्रतिस्पर्धा र प्रत्येक क्षणको वर्तमान व्यापार उद्देश्यहरूमा।
कसरी debtण मा वृद्धि अनुपात असर गर्छ?
माथि उल्लिखित दुई कम्पनीहरूको उदाहरणलाई ध्यानमा राख्दै, हामी देख्न सक्छौं कि दोस्रो कम्पनीले कति बढी orrowण लिन सक्छ। यसलाई परिप्रेक्ष्यमा हेरौं। यदि १ लाख युरो लगानी र / वा सम्पत्ति खरीदको लागि अनुरोध गरियो भने कम्पनीको मूल्य यसको १,१1०,००० युरोबाट बढ्नेछ (यसको सम्पत्तिले worthण छुट लगाउनु अघि शुद्ध सम्पत्ति जान्नको लागि) २,१1.170.000०,००० युरो हुनेछ।
Debtण १,२1.240.000०,००० युरोमा बढ्ने थियो (२€०,००० डलर अधिक plus १,००,०००)। उसको कुल सम्पत्ति 240.000 1.000.000 .०,००० मा रहनेछ। यसको मतलव तपाईको वित्तीय स्वायत्तता अनुपात € 930.000 .०,००० हुन्छ। १,२930.000०,००० द्वारा विभाजित ०.1.240.000 हुनेछ। लगभग समान, पहिलो कम्पनी को मामला को रूप मा।
स्पष्ट रूपमा यो गणना गोल संख्याको साथ सरल छ, र वास्तविकतामा कमिशन र करहरू दायित्वबाट लिइएको र सम्पत्तिहरूको अधिग्रहण कुल सम्पत्तिबाट छुट गर्नुपर्नेछ। तर जब यो आर्थिक प्रदर्शन अनुकूलन गर्न को लागी आउँछ, हामी देख्न सक्छौं कि दोस्रो कम्पनी अब आकार मा लगभग दोगुनी भएको छ। तसर्थ, तपाईंको कारोबार अधिक हुनेछ र तपाईंको अपरेटिंग नगदी प्रवाह बढ्नेछ, तपाईंलाई पहिले भन्दा बढ्नको लागि अनुमति दिँदै। एकै समयमा, यो अझै पनि केहि कठिन क्षण सामना गर्न यसको आफ्नै स्रोतहरू हुनेछ, तर स्वायत्तता अनुपात देखाउँदछ अधिक orrowण लिन खतरनाक हुन सक्छ र सिफारिस छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कम्पनीहरु » वित्तीय स्वायत्तता अनुपात